Sida ugu wanaagsan ee aad isaga wada deyn karto sigaar cabidda inta aadan ka shalaayin | Aayaha
Home»CAAFIMAADKA»Sida ugu wanaagsan ee aad isaga wada deyn karto sigaar cabidda inta aadan ka shalaayin
Aayaha editor Send an email October 13, 2018
Sigaarka waa cudur iyo caafimaad darro waxana qof kasta oo sigaarka caba looga baahanyahay inuu iska joojiyo.
Qaado taladaan si aad sigaarka deg deg ugu joojisid
Waqti kama dambeys ah u qabo
U qabo waqti kama dambeys ah oo aad ku joojineysid cabista sigaarka, adigoo qaadanaya go’aan adag naftaadana u sheegaya dhibaatada uu leeyahay caafimaad darrada aadka qaadeysid
Horey u soco
Had iyo jeer maskxadaada ku haay inaadan waxba ka niyad jabeen sababtoo ah sigaarka waxba kuuma haayo kaalamana maqno si kasta, ma jirto farxad uu ku siiyo ama faa’ido uu kuu keeno, waxa kaliya uu kaa dhigo waa inaad ku qabatinto.
Warkaan maskaxdaada gali: wax kaa dhumaya ma jiraan oo waxaad heleeysa fa’idooyin wanaagsan oo layaab leh oo aanan ahayn caafimaad kaliya balse awood iyo lacag, sidoo kale waxaad qof kalsooni heysta oo isku kalsoon, arrinta ugu muhiimsan ayaa ah awoodda iyo tayada mustaqbalka noloshaada.
Shido halka xabo ee ugu dambeeya
Waxaad shidataa oo leetarka aadku qabataa sigaarka ugu dambeeya adigoo qaadanaya go’aanka ugu dambeeya adigoo eegaya isbedelka kugu imaanaya mustaqbalka, ma shidan doontid sigaar kale mana qaadan doontid negotiinkiisa mar kale.
Kan waa mid kamid ah go’aannada ugu muhiimsan ee aad noloshaada sameyn doontid maxaa yeelay awoodda iyo tayada mustaqbalka noloshaada adiga ayay kugu xirantahay.
Ogoow inaad ka caban doontid joojinta sigaarka balse aadka gudbi doontid
Negotiinka sigaarka maalmo ayuu uga bixi doonaa sigaarka balse taas micnaheeda ma ahan inaad ka shalaaysid joojinta sigaarka.
Muddo yar ayuu sigaarka uga baxayaa jirkaaga dhaqsi ayaad ka gudbeysaa, waxaa intaas dheer in sigaar cabayaasha ay cawdaan inta ay ku jiraan nolosha sigaar cabista, ma jiro sigaarya cab aanan caban oo xanuuno iyo tabar darooyin kale aysan ku dhicin, waxaad noqoneysaa qofaan sigaar cabin adigoo si dhaqsi ah uga xoroobaya nolsoha sigaar cabista waligaa.
Bulshada si caadi ah iskaga dhex gal oo iska ilaali sigaar cabyada
Bulshada dhex gal oo noloshaada ku raaxeyso adigoo iska ilaalinaya sigaar cabyada, rumeeyso inay ku xaasidayaan maxaa yeelay mid kasta oo kamid ah sigaar cabyada wuxuu rajeynayaa inay adigoo kale noqdaan, ka xoroow nolosha mugdiga ah.
Ma jir sigaarya cab doonaya inuu arko caruurtiisa oo bilaabaya cabista sigaarka taasoo micnaheeda uu yahay inay ka shalaayaan qudhooda, xusuuso in kuwa sigaarka caba ay yihiin daciif, caafimaad ma heystaan, tabar malahan, lacag ma heystaan, maskax nabdoon malahan, kalsooni ma jirto,dhiiri galin malahan,xushmad ma heystaan,xoriyadna iskaba daa.
Haddii sigaarya cab uu sigaar kuusoo taago dheh “Maya, mahadsanid” sigaar ma cabo”, ama uga sheekeey inta aad sigaar moogtahay iyo waqtigaad iska dhaaftay.
Haka fekerin sigaar
H aisku dayin inaad ka fekerto sigaar, hubi in goor kasta oo aad ka fekerto,inaadan u baahneyn uma baahnid inaad sigaar cabtid mar dambo, waxaa tahay qofaan sigaar cabin intaas kadib waxaad ka fekeri kartaa waxyaabaha aad jeceshahay waxaadna heysan doontaa farxad.
Xittaa xabad ha cabin adigoo joojiyay
Nacasnimo yeysan ku qaadin dibna ha ugu laaban waqtiyadii xumaa isla markaana adkaa ee aad kasoo gudubtay.
Haddii aad sameysid siriqdii ayaad waqti uun dib ugu laabaneysaa, waligaa sigaar iyo wax ku saabsan haka fekerin, ka feker waxyaabaha kale ee noloshaada muhiimka u ah.
Iska ilaali waxyaabo bedel u ah sida xanjada iyo sigaar lagu magacaabo E-Cigaret
Ha isticmaalin waxyaabah bedelka u ah, waxay kugu sii adkeynayaan inaad joojisid taasoo keeneysa inaad sii wadid.
Waxyaabaha bedelka u ah sigaarka waxay leeyihiin Negotiin sida sigaarka lagu magacaabo E-cigaretes iyo wixii lamid ah, waxay keenayaan inaad ku qabatintid negotiinka inta ka dhiman noloshaada.
Qashinka ku dar sigaarka
Ha ilaashan sigaar oo ha dhigan meel kuu dhow, haddii aad taas sameysid micnaheeda waxa uu yahay in go’aankaaga uu shaki ku jiro, dadka aanan sigaarka cabin uma baahna sigaar.
Qofaan sigaar cabin ayaad noqotay marka aad tuurtay sigaarkii kuugu dambeeyay.
Ku raaxeyso noloshaada, u noloow sida dadka aanan sigaarka cabin dibna ugu noqon
Nolosha waxay si dhaqsi ah dib ugu laaban doontaa si caadi ah sida kuwa aanan sigaarka cabin, sida adarteed is ilaali oo dhibaatadii dib ha ugu noqon, haddii ay maskaxdaada bilaawdo sheekada ah hal xabo sigaar ah cab oo kale xusuuso ma jiro wax kaa celinaya dib ayaana ugu noqoneysaa.
UGAAR AH DUMARKA: Ninka leh sifooyinkaan halkaan arrin ayuu kugu rabaa
DIGNIIN: Sadexdaan Meelood Waligaa Ha Galin Taleefankaaga
Wax Ka Ogoow Faa’idooyinka Raqayga!
9 Sababood Oo Wali Aad Doob U Tahay, Una La’dahay Gabar Ku Rabta (Iska Bedel Dabeecadahaan)
Heesta “Macaan kaalay” ee Fanaanka Suldaan Seeraar oo qoraal ah (Akhriso)
Nin Mar Qura Wada Dilay Xaaskiisa Iyo Wiil Ay Dhashay Kadibna Sameeyay Arrin Yaab Leh